देउवा भन्छन् एनसेल प्रकरणमा न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन हुँदैन ! - Hamro Abhiyan
देउवा भन्छन् एनसेल प्रकरणमा न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन हुँदैन !
काठमाडौँ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालै एनसेलको लाभकर प्रकरण बारे फैसला सुनाउने न्यायाधिशहरुलाई तत्कालै महाअभियोग लगाउन नहुने बताएका छन्।
विराटनगर विमानस्थलमा मंगलबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्ने क्रममा देउवाले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै महाअभियोग बारे सोच्न सकिने बताएका हुन्।
एनसेलको करका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आफूले अध्ययन गर्न बाँकी नै रहेको बताउदै सभापति देउवाले न्यायाधिशहरुलाई महाअभियोग लगाउने भन्दा पुनरावलोकनको मुद्दा दिनुपर्ने तर्क गरे।
यस्तै देउवाले कम्युनिष्टको सरकार आएदेखि स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप मात्रै बढेको दावी गरेका छन्। वर्तमान सरकारले संचारमाध्यमलाई अकुंश लगाउन खोजेको समेत उनले आरोप लगाए।
वर्तमान सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लाउने, न्यायालय र प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता गर्नै नहुने काम गरिरहेको र नसच्याए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी समेत देउवाले दिएका छन्।
देउवा मंगलबार राष्ट्रिय जागरण अभियानको दोस्रो चरण उद्घाटन गर्न सुनसरी पुगेका हुन्। उनले विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै संवैधानिक बाध्यता रहेको कारण कांग्रेसको राष्ट्रिय अधिवेशन अगाडि नै अन्तरिम प्रदेश समिति बन्ने समेत जानकारी गराएका छन्।